Daawo muuqaalka markabkii ay soo furteen ciidanka badda Puntland – Puntland Post
Posted on March 18, 2017 March 18, 2017 by Dhiirane
Daawo muuqaalka markabkii ay soo furteen ciidanka badda Puntland
PUNTLAND POST ayaa soo bandhigaysa markii ugu horeysay muuqaalka markabkii lagu haystay caluula oo ay ku guulaysteen ciidamada badda Puntland habeenimadii 17 March 2017 inay kasoo furtaan kooxo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin Burcad badeeda Somalida ka dib hawlgal ka dhacay deegaanka Xaabo oo ka tirsan Gobolka Bari.
Markabka ARIS-13 oo ganacsato Somali ah u wada shidaal iyo saliid ayaa ka hor intii aan la afduuban ku wajahnaa dekeda Muqdisho balse iminka waxaa la geeyay dekeda magaalada Bosaso oo la filayo 18 March 2017 oo ku beegan maanta in loogu sameeyo xaflad balaaran oo uu ka qeyb galayo Madaxweyne kuxigeenka dowlada Puntland.
PUNTLAND POST ayaa dadweynaha la wadaagaysa muuqaalkii ugu horeeyay oo ciidanka badda Puntland kasoo duubeen Markabka ARIS-13 ka dib markey ku guulaysteen hawlgalkii ay kusoo furteen, Waana muuqaal laga soo duubay ka hor intaan la geyn Markabka ARIS-13 dekeda magaalada Bosaso.
Haddaba Daawo Wacan Muuqaalka Markabka ARIS-13.
FG:-Sidoo kale hoos ka eeg sawiro dhawr ah oo laga soo qaaday Markabkii lagu soo furtay hawlgalkii ciidanka badda Puntland ee habeen ka hor ka qabsoomay deegaano ka tirsan xeebta Gobolka Bari.
Puntland oo Wasiirka gaashaandhiga Somaliland iska hortaagtay inuu galo Badhan
Hoggaamiyaha Al-shabaab oo weerar afka ah ku qaaday Madaxda DFS, Imaaraadka iyo...
Golaha Xukuumadda Puntland oo yeeshay shir deg deg ah, maxaa ka soo baxay?